Dhageyso:-Wabiga Shabeelle oo fatahaad ka sameeyay Gobolka Shabellaha Dhexe | SMC
Home WARARKA MAANTA Dhageyso:-Wabiga Shabeelle oo fatahaad ka sameeyay Gobolka Shabellaha Dhexe
Wabiga Shabeelle ee mara Gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa saacadihii la soo dhaafay waxaa uu fatahaad ka sameeyay degmada Mahadaay iyo tuuloyin dhowr ah hoostaga,kuwaas oo ay ka barakaceen dadkii deganaa.
Tuulooyinka uu Wabiga ka fatahay ee degmada Mahadaay ayaa waxaa kamid ah,Tuulooyinka, Diinlaawe, Buurfuulo,Shiidle Bari,Buulo Axmed, Kulmis iyo deegaano,kale,isla markaana dalagyo farabadan ay fatahaada baabi’isay.
Guddoomiye kuxigeenka Arrimaha Bulshada degmada Mahadaay Saalax Xaaji Fuleyl ayaa sheegay in dhamaan tuulooyinkaas iyo kuwo kale ay ka barakaceen dadkii ku noolaa oo uu fataahada saameeyey,isla markaana deegaano kale ay dhibaatooyin ku heystaan.
Waxaa uu sheegay in ilaa iyo hadda Maamulka Hir-Shabeelle iyo Dowladda Federaalka aysan jirin gurmad kasoo gaaray,sidoo kalena Madaxda Maamulka Hir-Shabeelle ay iyagu yihiin kuwo toodii gabay sida uu hadalka u dhigay.
Wabiga Shabeelle ayaa sidoo kale horay fatahaad waxaa uu uga sameeyay Magaalada Beledweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan taas oo sababtay in dadkii ku noolaa ay u baracaan deegaanka Ceel-Jaale oo ku yaalla duleedka Magaaladaas.
Previous articleFaah Faahin kasoo baxeysa dil kadhacay dagmada Afgooye.
Next articleCiidamada Dowladda & kuwa AMISOM oo dhaq dhaqaaqyo ka wada Shabeellaha Hoose